Ungayivimba kanjani inja yami ukuthi ingakhonkothi kubantu? | Izinja Umhlaba
Ingabe inja yakho ikhonkotha abantu futhi ungathanda ukuthi ime? Uma kunjalo, into yokuqala okufanele uyazi ukuthi kungani iziphatha ngaleyo ndlela, ngoba kuzoba ukuphela kwendlela yokuthola isisombululo esisebenza ngempela. Kepha ungakhathazeki: sizokusiza ukuthola umsuka wenkinga.
Futhi, sizokunikeza amathiphu okuthi ungayimisa kanjani inja yami ukuthi ingakhonkothi kubantu futhi ube, ngale ndlela, ube yisilwane esijabulayo.
1 kungani izinja zikhonkotha?
2 Ungabavimbela kanjani abantu ukuthi bangakhonkothi?
kungani izinja zikhonkotha?
Izinja zingakhonkotha ngezizathu eziningi, okuyizona eziyinhloko:
UkukhungathekaUma sishiya isilwane sodwa singenakukwazi ukwenza lutho, noma uma singasinaki nsuku zonke, sizozizwa sikhungathekile, futhi sibe nesithukuthezi ngakho-ke sizokhonkotha. Ukugwema lokhu, kubaluleke kakhulu ukuthi sidlale ngayo, ukuthi siyikhiphele ohambweni futhi, ngamafuphi nje, sinikela ngesikhathi sakho.
Ukukhathazeka ngokwehlukanaUma uchitha isikhathi esiningi uwedwa, noma uma uyinja encike kakhulu kithina, ungaqala ukukhathazeka. Ukukusiza, singakunika i-kong ngenkathi singekho bese silandela lezi zeluleko ukukhathazeka ngokwehlukana.
Izinkinga zempilo kanye / noma ukuguga: njengoba ikhula, inja ingalahlekelwa ngumthamo wokuzwa kanye / noma ibe nezinkinga zempilo ezijwayelekile zokuguga. Ngenxa yalokho, kujwayelekile ukuthi akhonkothe ​​lapho ezwa ukuthi kukhona okuthile okuyingozi. Thina, njengabanakekeli bakhe, kufanele sibe eceleni kwakhe futhi sizame ukumthulisa ngomculo we-classic noma ngokuhambahamba (akudingeki ukuthi simnikeze amathoyizi, ukuphatha noma ukumthinta lapho ekulesi simo njengoba kungachazwa njengomvuzo ukungaphatheki kahle).
Izinkinga nezinye izinja: Uma engahlangani kahle, noma uma exabane nezinye izinja, uzokhonkotha ukuze enze ezinye izilwane ziqhelelane naye. Ngakho-ke, kubalulekile ukubonisana nochwepheshe ukuze asize uboya ukuthi bazi ukuthi buhlobene kanjani nezinhlobo zabo.
Ungabavimbela kanjani abantu ukuthi bangakhonkothi?
Kunezinto eziningana esingazenza ukuvimbela abantu ukuthi bakhonkothe. Okokuqala nokubaluleke kakhulu umkhiphele ukuhamba nsuku zonke. Inja ekhathele iyoba yisilwane ngokuvamile esingafuni ukukhonkotha kakhulu. Kepha, uma enza njalo, sizohamba nesikhwama sokuphatha izinja futhi sizomnika ngaso sonke isikhathi lapho sibona ukuthi kukhona osondelayo. Ngale ndlela, kancane kancane uzohlanganisa abantu nokuthile okuhle (ukuphatha).
Ekhaya, kusukela osukwini lokuqala, Kuyadingeka ukuthi sigqoke izingubo zabantu abadala, nezigqoko, nezikhafu, ... ngamafuphi, ngazo zonke izinhlobo zamasudi nezingubo. Ngakho-ke, njalo lapho sihambahamba inja ngeke izwe ukwesatshiswa yinoma ngubani futhi izokwazi ukujabulela ukuba ngaphandle. Ngesizathu esifanayo, kunconywa kakhulu ukumema abantu abehlukene ekhaya, abazokunika okumnandi.
Sithemba ukuthi lawa macebiso awusizo enja yakho ukuyeka ukukhonkotha kubantu 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Ungayivimba kanjani inja yami ukuthi ingakhonkothi kubantu?
Maria Jose kusho
Ngilethe inja encane yakwaSchnauzer, eneminyaka emi-4 ubudala ezinyangeni ezinhlanu ezedlule, yajwayela kahle mina nendodakazi yami, kodwa emadodeni amabili asendlini, ukhonkotha kakhulu lapho bemi noma behamba, bengingenzani?
Inja yami uMoni schnauzer, ngamthatha lapho eneminyaka emithathu, senginaye iminyaka emibili manje, muhle kakhulu, kepha uma umuntu efika ekhaya, noma ngabe bayamazi, akayeki ukukhonkotha kodwa indlela yokuphelelwa yithemba, wenza okufanayo lapho singena futhi Sishiya indlu futhi angazi ukuthi ngenzeni, ngoba akubekezeleleki.
Singakwazi ukugeza inja ekhulelwe?